Moe Kai: သူတို. နှစ်ဦး
ဒီနေ.လဲ ဗိုက်နာလို.တဲ့ ဆေးရုံရဲ. အရေးပေါ် ဌာနကို လာပြပြန်ပါတယ်။ အခန်းထဲ မဝင်မှီ အပြင်မှ လှမ်းကြည့် အကဲခတ် လိုက်တော့ သူမက ပါလာတဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ. အတူတူ ရယ်မော ပြောဆို၊ ထသွားထလာ နဲ.၊ အရမ်းကြီး မကျန်းမမာ ဖြစ်နေတာကိုတော့ မတွေ.ရပါ။ အခန်းထဲလဲ ကျမဝင်သွားရော “နာလိုက်တာ ကယ်ပါဦး။ သူမှာ ဘာမှ မစားနိုင်တာ ၅ ရက်ရှိပြီ။ ဒီနေ.ဆို ရေတောင် မသောက်နိုင်တော့ဘူး” တဲ့။ ဒီနေ. စစ်ဆေးသမျှ သွေးပေါင် ဆီး၊ သွေး အစစ အရာရာတော့ အားလုံး ပုံမှန်ပါပဲ။ ဗိုက်စမ်းမယ်လို. ဗိုက်ကို လက်နဲ. ရွယ်လိုက်တာနဲ. သူမက နာလွန်းလုို.တဲ့ အထိတောင် မခံနိုင်ပါဘူးတဲ့။ ဒါနဲ. သူမကို ပြောပြရတာက လုပ်ထားတဲ့ စစ်ဆေးချက်တွေက အရမ်းကို စုံနေပြီမို. ဘာမှ တကယ် ရောဂါကြီးကြီး ကျယ်ကျယ် မရှိတာ တော်တော် သေချာကြောင်း၊ ဒါကိုမှ မကျေနပ်သေးရင် နောက်ဆုံး စမ်းသပ် နိုင်ဖို. တဆင့်ပဲ ကျန်တော့ကြောင်း၊ အဲဒါကတော့ ဗိုက်ခွဲ ပြီး ကြည့်ဖို.ပဲ ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြတော့မှ သူမက ရီမောပြီး ပြန်သွားပါလေရဲ.။
နောက်လူနာ တယောက် ကြည့်မယ် ဆိုတော့ အသက် ၇၇-နှစ် အရွယ် အင်္ဂလိပ် အမျိုးသမီးကြီး ခြံစည်းရိုးပြင်နေရင်းမှ စည်းရိုးကို လှမ်း ဆွဲလုိုက်တာ ရုတ်တရက် ဗိုက်နာသွားလို.တဲ့။ သူမကျတော့ ဆေးရုံမှာ မနေချင်တော့ ဝမ်းဗိုက် ကြွက်သားကပဲ နာတာပါ။ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးပဲပေးပါ၊ အိမ်ပဲပြန်မယ်လုို.ပဲ ပြောနေပါတယ်။ ဗိုက်စမ်းတော့လဲ အတော်နာပုံ ပေါက်နေပေမယ့် “မနာဘူး ကိစ္စမရှိဘူး” အတင်းကို ပြောပြန်ပါတယ်။ ခဏလောက် သူအခန်းထဲက ထွက်လာပြီး အပြင်ကနေ အသာ အမှတ်တမဲ့ စောင့်ကြည့်တော့မှ သူမ မျက်နှာ ရှုံ.တွပြီး တော်တော်နာနေတာ တွေ.ရပါတယ်။ ဒါနဲ. သွေးဖောက် ဓါတ်မှန်ရိုက်တော့မှ အူပေါက်နေတာ ဖြစ်နေပြီး ခွဲခန်းကို အရေးပေါ် ခေါ်သွားရပါတော့တယ်။ သူမ ဆေးရုံ မတက်ချင်လုို. ပြောတာကို ယုံပြီး အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးလေးနဲ. သာ အိမ်ပြန်လွှတ်လိုက်မိရင် .... ကျမ ဆက်မတွေးရဲတော့ပါ။